Kandidà Rabary Paul: “Omena vahana ny tanora, ny fitsitsiana,…” | NewsMada
Kandidà Rabary Paul: “Omena vahana ny tanora, ny fitsitsiana,…”
Hirotsan-kofidiana ho filoham-pirenena koa i Paul Rabary, taorian’ny nanambarany fa tsy mpikambana HVM intsony. Aminy, mila mitsitsy ny fanjakana ary averina ny fifampitokisana amin’ny vahoaka.
“Tsy hiamboho adidy aho”. Io ny anisan’ny teny voalohany nataon’ny minisitra teo aloha, Rabary Paul, taorian’ny tsodrano azony tany Vavony, Ambila Lemaitso, distrikan’i Brickaville, omaly. Napetrany, omaly ihany koa etsy amin’ny lapan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, ny antontan-taratasy firotsaha-kofidina ho filoham-pirenena, natolotry ny antoko “Miasa ho an’i Madagasikara”.
Vinan-dRabary Paul ny “Madagasikara mahomby, ahafahan’ny Malagasy mivoatra amin’ny fiainana ary maha te honina”.
Isan’ny tanjona apetrany hampandrosoana ny firenena ny fanomezana sehatra ny tanora, ny fanomezan-danja ny vehivavy amin’ny fiainam-pirenena. Aminy, “mila mitsitsy ny fanjakana ary mitsinjo ny vahoaka fa tsy tokony handany vola fotsiny.
Mampieboebo ny sasany
Ao anatin’izany ny hivarotana ireo fiaram-panjakana raitra, mandany solika, sady mampieboebo ny sasany toy ny hita ankehitriny. Hofoanana ny Antenimierandoholona sy ny primatiora”.
Haverina ny fifampitokisan’ny vahoaka sy ny mpitondra ka hohelohina mandra-pahafaty ny tompon’andraiki-panjakana tratra manao kolikoly. Hataony laharam-pahamehana ny faritra mizaka tena. Amin’ny maha minisitra teo aloha ny Fanabezam-pirenena azy, nambarany fa hafainganina ny fanorenana sekoly sy ny fampitaovana manara-penitra.